Manjushree Finance Limited(Manjushree Finance Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
भारतमा अक्टोबरमा कोरोनाको 'तेस्रो लहर आउन सक्ने', नेपालमा के होला ?
एकहप्तामा गुम्यो १४.१ अर्ब डलर, गौतमको 'एशियाको दोश्रो धनी'को ताज पनि खोसियो
कोभिड संकटका बीच भारतको जीडीपी ग्रोथ ९.५% हुने प्रक्षेपण
कोरोना अपडेट: २४०१ थपिए, ३६६० डिस्चार्ज, ३४ को मृत्यु
मञ्जुश्री फाइनान्सको नाफा ९४% ले बढ्यो, ईपीएस रु. ५१.८२
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको नाफामा ९४ प्रतिशत बढीको उछाल आएको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिसम्म ३७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ९४.१६ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १९ करोड ३२...
मन्जुश्री फाइनान्सले सुरु गर्यो क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा
काठमाण्डौ। मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले डिजिटल बैंकिङलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। फाइनान्सले आज बिहीबारबाट क्यूआर कोड भुक्तानीको सेवा सुरु गरेको हो। ग्राहकको सुविधाका लागि स्मार्ट टेलरद्वारा भुक्तानीको सेवा प्रारम्भ गरी आफ्नै मोबाइल बैंकिङ एपबाट क्यूआर स्क्यान गरी आफ्नो बचत...
मञ्जुश्री फाइनान्सको रु. ५० करोडको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले निष्कासन गरेको ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज शुक्रबारसम्म आवेदन दिन पाइने भएको छ। ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका अनुसार आज बैंकिङ समयसम्म यो ऋणपत्रमा आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले गत माघ १८ गतेदेखि १ हजार अंकित दरका कुल ५ लाख इका भएको ‘९.५% मञ्जुश्री फाइनान्स...
मञ्जुश्री फाइनान्सको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय थप, अब कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले निष्कासन गरेको ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको छ। कम्पनीले गत माघ १८ गतेदेखि १ हजार अंकित दरका कुल ५ लाख इका भएको ‘९.५% मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ऋणपत्र–२०८५’ निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा मागअनुसारको आवेदन नपरेका कारण आवेदन दिने म्याद थप गरिएको हो। अब यो...
मञ्जुश्री फाइनान्सको रु. ५० करोडको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुला, कति ब्याज पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र आज आइतबारबाट बिक्री खुला गरिएको छ। कम्पनीले १ हजार अंकित दरका कुल ५ लाख इकाइ भएको ‘९.५% मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ऋणपत्र–२०८५’ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले कुल इकाइमध्ये ३ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी २ लाख इकाइ (सोमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् १० हजार इकाइ...
मञ्जुश्री फाइनान्सको नाफा घट्यो, रिजर्भ बढ्यो
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म संस्थाको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनासम्म २०.९० प्रतिशतले घटेको हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म संस्थाको खुद नाफा १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको...
मञ्जुश्री फाइनान्सको रु. ५० करोडको ऋणपत्र माघ १८ बाट निष्कासन हुने, ब्याज कति पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र यही माघ १८ गतेबाट निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले १ हजार अंकित दरका कुल ५ लाख इकाइ भएको ‘९.५ प्रतिशत मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ऋणपत्र–२०८५’ निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीले कुल इकाइमध्ये ३ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी २ लाख इकाइ (सोमध्ये ५ प्रतिशत...
मञ्जुश्री फाइनान्सकी अध्यक्ष घिमिरेद्वारा सपथ ग्रहण
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडकी नवनियुक्त अध्यक्ष इन्दिरा पन्डित घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको सपश लिएकी छन्। नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकी हुन्। यसैबीच संस्थाको हालै सम्पन्न १३ औंं वार्षिक साधारणसभाले कुल २३.५० प्रतिशत लाभांश स्वीकृत...
मञ्जुश्री फाइनान्सले २३.५% लाभांश अनुमोदन गर्न कहिले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा ?
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो १३ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो मंगलबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस २९ गते बुधबार आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौ नयाँ बानेश्वरस्थित कम्पनीको कार्यालयमा बिहान ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि...
मञ्जुश्री फाइनान्सद्वारा २३.५% लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको आज आइतबार अपराह्न बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्तापुजीको कुल २३.५० प्रतिशतले हुन आउने १९ करोड २२ लाख ६० हजार ८४६.९६ रुपैयाँबराबरको लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा १८...
केजीकै रु ४.३२ लाख पर्ने आँप !
यूनाइटेड फाइनान्सलाई नवीलमा मर्ज गराएका अजय मिश्रद्वारा अवकाशको घोषणा
चिनियाँ वैज्ञानिकलाई आश्चर्यलाग्दो सफलता, भाले मुसाबाट बच्चा जन्माउने सफलता